Ukuhonjiswa kweKrisimesi Iimpawu zobugcisa - izimvo zekhaya kunye negadi
Izimvo zeKrisimesi. Umhlobiso weKrisimesi. Ukuhonjiswa kweKrisimesi. Umhlobiso weKrisimesi. Yenza ngokwakho umhlobiso weKrisimesi.
Iingcamango zomhlobiso weKrisimesi ezivela kwizinto zendalo
Ukuba sele udiniwe yimigca ekhazimlayo kunye nekrisimesi ebengezelayo
Iingcamango zoMhlobiso weKrisimesi emdaka
Umbala we-Purple usalawula imeko yangaphakathi yoyilo,
Ukuhonjiswa kweKrisimesi ngezitikha
Ukuhlobisa iKrisimesi ngesitikha yenye indlela yomhlobiso
Iimbono zeKrisimesi yoHlelo lweKrismesi yoqobo
Sivelisa imibono yakho ngokwahlukileyo kwetafile yeKrisimesi, ngayo
Yenza i-Wine yeBhotile yeWayini-Isipho seKrisimesi sasekuqaleni
NgeKrisimesi, wonke umntu ufuna indlela yokukholisa abathandayo kwaye
I-Snowman yamathayi amadala
Le ngumbono olula wokuhonjiswa kobusika egadini, ngakumbi
Uyifumana njani ifolda yeNapkin yeKrisimesi |
Kwiintsuku zangaphambi kweKrisimesi kukho imeko ekhethekileyo yokulungiselela ubushushu
Njengoko iiholide ezikhanyayo zonyaka zisondela, yonke into phandle iyabengezela
Ukuhonjiswa komhlobiso weKrisimesi ngamakhandlela
Iingcamango zomhlobiso wetafile yeKrisimesi apho kugxilwe khona
Ukuhonjiswa kwekomityi yekrisimesi
Ukuhonjiswa okumnandi nekomityi yekomityi yeKrisimesi. Umahluko wokuqala
Iimbono ezisibhozo zomhlobiso weKrisimesi omileyo
Iimbono eziveziweyo zezihombiso lweKrisimesi ikakhulu emhlophe. In
Zenzele indoda enekhephu yokuhombisa iKrisimesi
Le vidiyo ingezantsi inika umbono wokuba singaba lula kangakanani
Yenza ngokwakho izibane zeKrisimesi
Umbono onomdla wokwenza izibane zebhaluni, ii-sofa,
ICrystal Christmas nguThomas Kincaid
UThomas Kincaid ngumculi odumileyo waseMelika.
Enye indlela yekhephu eyenziwe ngeendebe zeplastiki
Ukwenza ikhephu ngaphandle kweendebe zeplastiki kulungile
Ngokuqinisekileyo ukhe uzibuze ngaphezulu kwakanye: uhlala phi kanye kanye uSanta ?.
Yenza umhlobiso we-silicone weKrisimesi
Ukwenza ngokwakho izinto zomhlobiso weKrisimesi kuyinxalenye
Yenza ikrisimesi ngokubhalwa kwamaphepha
Ungazenza Njani Isisongelo seKrisimesi seRoll yePhepha,
Umoya weKrisimesi eMelika
E-US, ukuqala kweholide zobusika kusagqithile
Ukuhonjiswa kweKrisimesi yangaphandle
Uninzi lwakho sele luyihombisile ikhaya lakho
UDisemba wayeyeyona nto ibalaseleyo kwiinyanga zobusika. Eyona holide kulindeleke ukuba isondele
Iplastiki yeqanda leplastiki
Zenzele iKrisimesi yomthi weBhokisi zePlastiki
Iiholide ezimnandi kakhulu zonyaka zizayo.
Iimbono zoMthi weKrisimesi woqobo
Nazi ezinye zeengcebiso zomthi weKrisimesi.
Iphepha le1 lisuka kwi3123Okulandelayo »